बिदेशका कुरा Archives - baideshikrojagar
Category: बिदेशका कुरा
Golden opportunity of foreign employment in QATAR, Tri construct
पुस २५, २०७८ पुस २५, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on Golden opportunity of foreign employment in QATAR, Tri construct
Particulars Details Minimum Qualification Under SLC Working experience According to position Visa Ticket Provided Food Provided Accommodation Provided Service Charge(Nrs.) Rs.0Pre-medical in Nepal Provided Employment Insurance Provided by hiring company Contract Period (in years)2Years Job Position | Salary Details Job Position Male Female Salary Driver 1055,369 Labour90 […]
काठमाण्डौ – सरकारले अफगानिस्तानबाट थप ३२ जना नेपालीलाई उद्धार गरेर आज काठमाण्डौ ल्याएको छ । आज उद्धार गरेर ल्याएका ३२ जनासहित अहिलेसम्म अफगानिस्तानबाट नौ सय ४० जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । आज नेपाल आएकाहरु श्रम स्वीकृति नलिइकनै अनौपचारिक हिसाबले रोजगारीको लागि अफगानिस्तान गएका मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी काबुलसहित विभिन्न ठाउँमा […]
काठमाडौँ अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको छ जसमा महिलाहरुलाई बाटोमा मूल्य बढाबढमा बेचिएको छ । भिडियोमा देखिएका पुरुषको भाषा र महिला तथा पुरुषले लगाएको भेषले त्यो कुनै मुस्लिम देशको सडक रहेको स्पष्ट हुन्छ । केही पुरुषले बुर्काले छोपिएका किशोरीहरुको मूल्य बढाबढ गरेको देखिन्छ । सडक छेउको सार्वजनिक स्थानमा मूल्य बढाबढ गर्दै भाउ मिलेपछि […]
एजेन्सी । जनावरमा पनि कति मानवीयता हुन्छ भन्ने कुरा एउटा कुकुरले देखाएको छ । मानिसको संधै नजिक रहन चाहने कुकुर दुख सुखको साथी पनि हो । टर्कीमा एउटा कुकुरले आफ्नो मालिकप्रति देखाएको अगाध भक्ति र स्नेहको भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइरल भएको छ । मालिक बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुँदा पनि एउटा बफादार कुकुरले अस्पतालमा […]
काठमाडौं। जापानको राजधानी टोक्यो नजिकै प्रशान्त महासागरमा ज्यालामुखी विष्फोट हुँदा २ दर्जन भुताहा जहाज बाहिर निस्किएका छन् । जापानको अल निप्पो न्यूजले हेलिकप्टर फुटेजमा यी जहाजहरु देखाएको छ । हेलिकप्टर भूकम्पीय गतिविधि र ज्वालामुखी विष्फोटपछि यो समुद्री षेत्रको समाचारको लागि फोटो लिइरहेको थियो र भिडियो फुटेज बनाइरहेको थियो । यी भुताहा जहाज दोस्रो वि,श्वयु,द्धकालका हुन् […]
कार्तिक १३, २०७८ कार्तिक १३, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on परिवर्तन भयो फेसबुकको नाम, यसरी हुनेछ ‘रिब्रान्डिङ’
काठमाडौं । गलत सूचना र समाचारको सम्प्रेषण अनि बारम्बार प्रयोगकर्ताको डेटा लिक भएका कारण धूमिल हुँदै गएको फेसबुकले आफ्नो कर्पोरेट नाम नै परिवर्तन गरेको छ । स्थापनाको १७ वर्षपछि बिहीबार फेसबुकले आफ्नो कर्पोरेट नाम अबदेखि ‘मेटा’ राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । यससँगै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र ओकुलसको मुख्य कम्पनीको नाम अब मेटा इङ्क हुनेछ […]
भारत, यूके संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति २०२१ मा भाग लिए
कार्तिक १३, २०७८ कार्तिक १३, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on भारत, यूके संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति २०२१ मा भाग लिए
बेलायत र भारतीय सशस्त्र सेनाहरू बीचको पहिलो द्विपक्षीय त्रि-सेवा अभ्यास ‘कोंकण शक्ति २०२१’ को समुद्री चरण अरब सागरको कोंकण तटमा सुरु भएको छ। भारतीय नौसेनाका एक अधिकारीका अनुसार पूर्व निर्धारित स्थानमा सेनाको स्थल-सेनालाई अवतरण गर्न ‘समुद्री नियन्त्रण’ हासिल गर्ने उद्देश्यले सहभागी सबै युनिटलाई दुई विरोधी शक्तिमा विभाजन गरिएको थियो। “भारत र यूके सशस्त्र सेनाका सबै […]
कस्तो नि’र्दयी सं’स्कार ! किन गरिन्छ छोरीको यो’नी छेदन ?
कार्तिक १२, २०७८ कार्तिक १२, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on कस्तो नि’र्दयी सं’स्कार ! किन गरिन्छ छोरीको यो’नी छेदन ?
महिलाको यो’नि छे’दन गर्ने एक नि’र्दयी सं’स्कारलाई का’नूनी रुपमा प्रति’बन्ध लगाइएपनि अझै पनि विश्वका कतिपय देशहरुमा यो प्रचल’न कायमै रहेको छ । भारतको एउटा सानो बोहरा मु’स्लिम समु’दायमा यो कु’प्रथा अझै पनि विद्यमान छ । बोहरा समुदायका महिलाहरुले स्वास्थ्यसँग प्र’त्यक्ष सरोकार राख्ने यस कुस’स्कारला’ई हटा’उन विभिन्न अभियान चालेका छन, तथापी यस कु’प्रथामा कुनै क’मि आएको […]
चीनमा बन्यो श्वासबाट लिइने कोरोना भ्याक्सिन, तीन सय गुणासम्म एन्टिबडी
कार्तिक १२, २०७८ कार्तिक १२, २०७८ देश परदेशLeaveaComment on चीनमा बन्यो श्वासबाट लिइने कोरोना भ्याक्सिन, तीन सय गुणासम्म एन्टिबडी
बेइजिङ । सारा दुनियाँका लागि खुशीको खबर आएको छ । चिनियाँ औषधि कम्पनी क्यानसिनो बायोलोजिक्सले श्वासबाट लिन सकिने एउटा नयाँ किसिमको कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन विकसित गरेको छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार बुस्टर डोजका रूपमा प्रयोग गर्दा यो भ्याक्सिनले एन्टिबडीको स्तरलाई २५० देखि ३०० गुणासम्म बढाउने यसको निर्माता कम्पनीको दाबी छ । चिनियाँ औषधि कम्पनी क्यानसिनो बायोलोजिक्सले […]